Ya mere, ị dị nnọọ furu efu gị azụ elu paswọọdụ echebe na iTunes. A na-eme ziri ezi? Ọ bụ otu n'ime ndị na okwuntughe ị na-mgbe niile na-echefu, ma ọ bụ na ị na mgbe o yiri mara ihe paswọọdụ iTunes na-arịọ iji nweta niile nke gị faịlụ. Bụrụ na-eme, e nwere bụ naanị otu nkọwa: paswọọdụ gị nchebe na iTunes-apụghị Ewepụtara na iTunes apụghị-unlocked. Ma e nwere ihe a zuru okè ezi uche nkowa maka na: a izo ya ezo usoro odịbe ozi ị na-agaghị achọ inye onye ọ bụla. Ọzọkwa, ezoro ezo na iTunes azụ elu-agụnye ọmụma dị otú ahụ dị ka gị Wi-Fi ntọala, website akụkọ ihe mere eme na ahụ ike data.
Ya mere, ihe usoro ị ga-eji iji weghachite nke ozi nile nke ugbu a kpọchiri na iTunes na nke ị na-adịghị enwe ohere ọzọ?
Ngwọta 1. Gbalịa iji ihe ọ bụla paswọọdụ ị maara.
Ka ihe atụ, ị pụrụ iji na-agbalị na gị iTunes ụlọ ahịa paswọọdụ. Ọ bụrụ na nke na-adịghị arụ ọrụ, tụlee Apple ID paswọọdụ ma ọ bụ gị Windows nchịkwa paswọọdụ. Ọ bụrụ na ị nweghị chioma nnọọ, na-agbalị nile di iche iche nke ọdịiche nke gị na ezinụlọ gị aha ma ọ bụ ụbọchị ọmụmụ. Dị ka ihe ikpeazụ akụ, na-agbalị ụfọdụ ọkọlọtọ okwuntughe ị na-emekarị na-eji maka gị akaụntụ email, weebụsaịtị ị na-aha. Site na iji otu okwuntughe họọrọ dị iche iche na weebụsaịtị fọrọ nke nta mgbe enyere aka!
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị fọrọ nke nta enye elu na ị na-eche na e nwere ihe ọ bụla ọzọ ga-eme, na-eche ọzọ! Ihe ngwọta nsogbu gị bụ nso karịa ị na-eche.
Ngwọta 2. Naghachi gị iTunes ndabere paswọọdụ na enyemaka nke a ọzọ ngwá ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-enweghị ihe ịga nke ọma na nke a mbụ usoro, gịnị mere unu adịghị anya n'ihi na a ọzọ ngwá ọrụ ikwe gị weghachite paswọọdụ gị kama? A na ime-ukwuu tụrụ aro na ị ga-agụ ha aha na dị iche iche forums, eleghị anya e kwuru okwu ndị na-gị otu nsogbu. Ya mere, ka anyị tụlee Jihosoft iTunes Back elu Unlocker na iTunes Paswọdu decryptor.
Nhọrọ 1: Jihosoft iTunes ndabere Unlocker
Nke a na usoro bụ mfe mmadụ iji n'etiti abụọ na awade atọ dị iche iche decryption ụzọ. Mfe iji wụnye, ọ na-abịa gị nnapụta n'emebighị ọ bụla nke gị ndabere data na enyemaka nke gị iPhone na-esonụ ikpe:
iTunes na-arịọ maka iPhone ndabere paswọọdụ kama m na mgbe setịpụrụ.
iTunes kpaliri na paswọọdụ m banyere Ị kpọghee ekwt m iPhone ndabere adabaghị.
Ị kpam kpam chefuru gị iTunes ndabere paswọọdụ wee na ị gaghị weghachi iPhone nkwado ndabere na mpaghara.
Nke mbụ niile, ị chọrọ nwụnye usoro ihe omume na kọmputa gị. Gaa na website maka download: http://www.jihosoft.com/itunes/itunes-backup-unlocker.html
Họrọ paswọọdụ echebe iPhone ndabere faịlụ na pịa "Ekem" ịnọgide.
Ugbu a ọ bụ oge ịhọrọ nke nke atọ decryption ụzọ na ị chọrọ iji iji weghachite paswọọdụ gị. Ị nwere ike ịhọrọ n'etiti 'arụrụala ike agha', 'arụrụala-ike na nkpuchi agha' na 'Dictiory agha'. Ndumodu: ma ọ bụrụ na ị na-echeta ọbụna akụkụ nke paswọọdụ gị, arụrụala-ike na nkpuchi agha na-ike na-atụ aro!
Mgbe niile ntọala na-mere, pịa "Next" na mgbe "Malite" ka usoro ihe omume naghachi iPhone ndabere paswọọdụ.
Nhọrọ 2: iTunes Paswọdu Decryptor
Nke a bụ free ngwá ọrụ ekwe ka ị na-agbake paswọọdụ gị ngwa ngwa ma ọ na-arụ ọrụ a ubé dị iche iche ụzọ. The mgbake na n'ezie mere site ọ bụla nke na-ewu ewu nchọgharị weebụ na-eji.
Chee echiche ihe atụ na ọ fọrọ nke nta niile nchọgharị nwere paswọọdụ njikwa arụmọrụ na-echekwa nbanye okwuntughe (ihe nke nwekwara eme na Apple iTunes!). Nke a arụmọrụ eme ka o kwe gị ịbanye ọ bụla website nke ị na ịdenyere aha na aha njirimara na paswọọdụ na-enweghị inserting nzere gị oge ọ bụla ị chọrọ abanye na. Onye ọ bụla n'ime ndị a nchọgharị na-eji a dị iche iche nchekwa Ọkpụkpọ na izo ya ezo usoro inye nchebe maka okwuntughe.
iTunes Paswọdu Decryptor na-akpaghị aka crawls site bụla n'ime ndị a nchọgharị na n'otu ntabi naputa niile echekwara Apple iTunes okwuntughe. Ọ na-akwado ndị na-esonụ nchọgharị:
Ìgwè Atụrụ Safari
The software abịa na a mfe installer na-enwe ike iji wụnye ya na gị usoro mgbe ọ bụla ọ dị mkpa. Iji na-eji ya:
Ozugbo arụnyere, ẹkedori software na gị usoro (ibudata ya ebe a http://securityxploded.com/apple-itunes-password-decryptor.php)
Wee pịa na 'Malite Iweghachite' niile echekwara Apple iTunes akaụntụ okwuntughe si dị iche iche ngwa ga-natara na egosipụta dị ka n'okpuru:
Ugbu a, i nwere ike ịzọpụta niile natara paswọọdụ ndepụta iji HTML / XML / Text / CSV faịlụ site na ịpị on 'Export' button na mgbe ahụ họrọ ụdị nke faịlụ site na dobe ala igbe nke 'Zọpụta File dialog'.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọrọ iji ọ bụla nke a ụzọ, e nwere ihe a atọ ngwọta gị nsogbu.
Ngwọta 3. Nyefee faịlụ site na gị iOS ngwaọrụ (iPod, iPad, iPhone) na-enweghị iTunes
Usoro a ka na-agụnye ojiji nke a software nyefee gị faịlụ ma ọ ga-enyere gị ịkekọrịta ma nyefee gị data enweghị iTunes mgbochi. Iji na-eme otú ahụ, anyị nwere ike ikwu na download nke Wondershare TunesGo Ochie.
Wondershare TunesGo Ochie na-enye ohere ịkọrọ ma nyefee niile nke gị faịlụ ka ọ bụla iOS ngwaọrụ ma ọ bụ PC ma ọ bụ ịkọrọ faịlụ site na ngwaọrụ gị, gụnyere album artwork, listi ọkpụkpọ na music ọmụma na-enweghị ojiji nke iTunes. Ọ na-ewepu oyiri music faịlụ na ọtụtụ ihe n'ihi na gị mkpa, ọ weere music tọrọ atọ n'ime ochie ngwaọrụ. Iji na-eji ya:
Download software na kọmputa gị mbụ.
Jikọọ na ngwaọrụ gị site eriri USB. Cheta TunesGo Ochie ike iwughachi gị dum iTunes n'ọbá akwụkwọ gị iPod, iPhone na iPad.
Pịa na Media on ekpe kọlụm na pịa Music iru music window.
Mgbe ahụ, pịa triangle n'okpuru "Export ka" iji họrọ mbupụ music gị iDevice ma ọ bụ gị na kọmputa.
Ugbu a, ị maara n'ezie ụzọ niile dị ka weghachite gị iTunes ndabere paswọọdụ na-enweghị na-ata ahụhụ ihe ọ bụla ọzọ. Jisie ike!
Complete Ngwọta n'ihi iTunes Music Library
> Resource> iTunes> 3 Ngwọta n'ihi na-echefu iTunes ndabere Paswọdu